၉၀၃၇၇ ဆဒ်နာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟာဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ်မှ မြင်ရသော ဆဒ်နာ
TNO  ၊ detached
မရေရာသည့် ပါရာမီတာ 2
9240 days (25.30 yr)
7013113831562979431♠76.0917±0.0087 AU (q)
≈ 7004114000000000000♠11400 yr[lower-alpha ၁]
၁၀.၂၇၃ h (၀.၄၂၈၀ d)
၉၀၃၇၇ ဆဒ်နာ သည် နေအဖွဲ့အစည်း အပြင်နားရှိ ကြီးမားသော ဂြိုဟ်ငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်အရ ယင်းသည် နေမှ ၈၆ astronomical unit (၁.၂၉×၁၀၁၀ ကီလိုမီတာ; ၈.၀×၁၀၉ မိုင်) အကွာသို့ (နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ထက် ၃ ဆ ပိုမိုဝေးကွာ) ရောက်ရှိလျက်ရှိသည်။ ဆဒ်နာ၏ မျက်နှာပြင်သည် ရေ၊ မီသိန်း အစိုင်အခဲ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ရေခဲများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပြီး နေအဖွဲ့အစည်းရှိ အနီရောင် အသမ်းဆုံး အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဂြိုဟ်ပုတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီး ဂြိုဟ်ရံလ မရှိပေ။
နေမှ အဝေးဆုံးပတ်လမ်းသည် ၉၃၇ AU ကွာဝေးပြီး နေအဖွဲ့အစည်းရှိ ကာလကြာရှည် ကြယ်တံခွန်များထက် ပိုမိုဝေးကွာသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အရ ဆဒ်နာသည် နေမှ ၈၆.၃ AU ကွာဝေးသည်။ လက်ရှိတွင် နေအဖွဲ့အစည်းရှိ အဝေးကွာဆုံး ဂြိုဟ်ပုများဖြစ်သော အဲရစ်သည် ဆဒ်နာထက် နေမှ ၉၆.၄ AU ကွာဝေးလျက်ရှိသည်။ အဲရစ်သည် နေမှ အဝေးဆုံးအကွာအဝေးသို့ ရောက်ရှိရန် နီးကပ်လျက်ရှိပြီး ဆဒ်နာသည် နေနှင့် အနီးဆုံးအကွာအဝေးသို့ ချဉ်းကပ်လျက်ရှိသည်။ ဆဒ်နာသည် နေအဖွဲ့အစည်းရှိ အလျင်မြန်ဆုံး အရာဝတ္ထုအဖြစ် ၂၁၁၄ ခုနှစ်တွင် အဲရစ်ကို ကျော်တက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဆဒ်နာ၏ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသည် ရှည်လျားလှပြီး နေအား တစ်ပတ် လှည့်ပတ်မိရန် နှစ်ပေါင်း ၁၁၄၀၀ ကြာမြင့်ကာ နေနှင့် အနီးဆုံး အကွာဝေးမှာ ၇၆ AU ဖြစ်သည်။ နက္ခတ္တပညာရှင် Michael E. Brown က ပုံမှန်မဟုတ်သော ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းရှိ ဆဒ်နာအား ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် အရေးကြီးပြီး နေအဖွဲ့အစည်း၏ မူလဇာတိအား ဖော်ထုတ်ရာတွင် အထောက်အကူ ပြုသည်ဟု ယူဆသည်။
↑ Given the orbital eccentricity of this object, different epochs can generate quite different heliocentric unperturbed two-body best-fit solutions to the orbital period. Usinga1990 epoch, Sedna hasa12,100-year period, but usinga2017 epoch Sedna hasa10,900-year period. For objects at such high eccentricity, the Sun's barycentric coordinates are more stable than heliocentric coordinates. Using JPL Horizons, the barycentric orbital period is approximately 11,400 years.
↑ Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (90001)–(95000)။ IAU: Minor Planet Center။ 2008-07-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ JPL Small-Body Database Browser: 90377 Sedna (2003 VB12)။ 25 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Marc W. Buie (2009-11-22)။ Orbit Fit and Astrometric record for 90377။ Deep Ecliptic Survey။ 2006-01-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ Horizons output။ Barycentric Osculating Orbital Elements for 90377 Sedna (2003 VB12)။ 2011-04-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (Solution using the Solar System Barycenter and barycentric coordinates. Select Ephemeris Type:Elements and Center:@0) (Saved Horizons output file 2011-Feb-04 Archived copy။ 2012-11-19 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2012-01-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။) In the second pane "PR=" can be found, which gives the orbital period in days (4.15E+06, which is ~11400 Julian years).
↑ "Corrallingadistant planet with extreme resonant Kuiper belt objects" (2016). The Astrophysical Journal Letters 824 (2): L22. doi:10.3847/2041-8205/824/2/L22. Bibcode: 2016ApJ...824L..22M.
↑ Kaib, Nathan A. (2009). "2006 SQ372: A Likely Long-Period Comet from the Inner Oort Cloud". The Astrophysical Journal 695 (1): 268–275. doi:10.1088/0004-637X/695/1/268. Bibcode: 2009ApJ...695..268K.
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ""TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region. VII. Size and surface characteristics of (90377) Sedna and 2010 EK139" (2012). Astronomy & Astrophysics 541: L6. doi:10.1051/0004-6361/201218874. Bibcode: 2012A&A...541L...6P.
↑ Case of Sedna's Missing Moon Solved။ Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (2005-04-05)။ 2005-04-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Stephen C. Tegler (2006-01-26)။ Kuiper Belt Object Magnitudes and Surface Colors။ Northern Arizona University။ 2006-09-01 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-11-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ AstDys (90377) Sedna Ephemerides။ Department of Mathematics, University of Pisa, Italy။ 2011-05-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ JPL Horizons On-Line Ephemeris System (2010-07-18)။ Horizons Output for Sedna 2076/2114။ 2012-02-25 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-07-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Horizons
↑ Porter၊ Simon (2018-03-27)။ #TNO2018။ Twitter။ 2018-03-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lakdawalla၊ E. (19 October 2016)။ DPS/EPSC update: 2007 OR10 hasamoon!။
↑ AstDys (136199) Eris Ephemerides။ Department of Mathematics, University of Pisa, Italy။4June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2011-05-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cal Fussman (2006)။ The Man Who Finds Planets။ Discover။ 16 June 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-05-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chang, Kenneth, Ninth Planet May Exist Beyond Pluto, Scientists Report, New York Times, 21 January 2016, page A1
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၉၀၃၇၇_ဆဒ်နာ&oldid=730427" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၁:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။